RW Khayre oo kulan deg deg ah la qaatay Madaxda hay’adaha Amniga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta RW Khayre oo kulan deg deg ah la qaatay Madaxda hay’adaha Amniga
RW Khayre oo kulan deg deg ah la qaatay Madaxda hay’adaha Amniga
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa kulan deg deg ah waxaa uu la qaatay Mas’uuliyiinta Hay’adaha Amniga dalka,kadib markii uu kormeer ku soo sameeyay in ka badan 30 Isgoys oo ku yaalla Magalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa intiisa badan looga hadlayay xaalada Amni ee Magalada Muqdisho iyo sidii loo dardargelin lahaa, waxaana goobjoog ka ahaa, Wasiirka Amniga, Taliyeyaasha Ciidamada,sida Booliska iyo Asluubta iyo guddoomiyaha Gobolkan Banaadir.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga Cabdi Naasir Siciid Muuse oo Saxaafada la hadlay ayaa sheegay in Ra’iisul wasaaraha uu hay’adaha Amniga la wadaagay waxyaabaha uu kusoo arkay Barihii koontorool ee uu kormeerka ku tegay iyo diyaar garoowga Ciida.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha uu Hay’adaha amniga faray dardargelinka sugida Amniga iyo in Hay’adaha Amniga u diyaar garoobaan u adeegida Shacabka inta lagu jiro Maalmaha Ciida.
Previous articleDowladda oo soo saartay hab-raaca doorashooyinka M/gobaleedyada
Next articleMadaxwayne Farmaajo oo u ambabaxay dalka S/Carabiya